SanDisk SD kaadị na-otu nke kasị mma SD na DSLR kaadị emepụta nke na-n'aka na elu na klas na àgwà ọrụ na-nyere ka ọrụ. The SanDisk bụ a tụkwasịrị obi ika nke ụlọ ọrụ na maka otu ihe ahụ ọ na-ahuta ka n'elu oke nke ọrụ si gburugburu ụwa.
Ehichapụ ọ bụ furu efu data on SanDisk kaadị
Ọ bụ otu n'ime ihe ndị kasị ihe na-eduga na okwu maka ọrụ na resultantly ha na-adịghị ike iji SanDisk kaadị na larịị nke afọ ojuju n'ihi na nke ha e mepụtara. Ọ na-na-kwuru na e nwere ọtụtụ iri puku mgbake software omume nke na-ekpuchi bụghị naanị SanDisk ma onye ọ bụla na ihe ọ bụla kaadị nke ụwa mgbe ọ na-abịa data mgbake. The SanDisk kwesịrị mere a ga-scanned na nke kacha mma dị software na nke a nke kwesịrị maa bụghị abụ a freeware na niile dị ka freeware data mgbake software omume mgbe arụ ọrụ mgbe nile. Onye ọrụ kwesịrị mere nọrọ iji ego nweta a software n'elu ikpo okwu nke ọ bụghị nanị na-akawanye onye ọrụ na free upgrades ndụ ma na-enye zuru uru ego bara ka onye ọrụ. SanDisk bụ a reputed aha na ụwa nke SD na Micro SD kaadị na Ya mere nke na-adịkarịghị chere ihu ma ọ bụrụ na ọ bụ ikpe mgbe ahụ omume nke ga-eji ga-dakọtara na mma larịị nke SanDisk kaadị iji jide n'aka na data bụ Ewepụtara nke bụ doro anya na ezigbo mkpa n'ihi na ọrụ. Classy software ga-emekwa ka n'aka na ọ bụrụ na e a oge ọzọ mgbe ahụ ka akpan akpan omume na-eji iji jide n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi chọrọ results na ndị ahịa na-aghọ anọ ika nochite anya nke software emeputa.
3 mfe nzọụkwụ naghachi faịlụ site na a SanDisk kaadị
Nke ọma dị ka doro akara na-atụ aro ndị nkuzi na-arutu kwupụta otu nke kasị mma software omume mgbe ọ na-abịa data mgbake na ọ na-aha dị ka Wondershare Data Recovery nke e mepụtara site na Wondershare Inc. iji jide n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi kasị mma na nke Steti nke nkà ọrụ na nke a. The isi mma nke usoro ihe omume bụ sọrọ mode triggering nke na-eme ya dokwara usable nke ọ bụla na klas nke onye ọrụ na Ya mere ojiji na data nlaghachie na-eme na ihe kasị mma n'ụzọ. Ọ na-gwara ka ọrụ na-mgbe wụnye ihe omume na otu disk si ebe data nlaghachie a chọrọ ka ọ ga-overwrite data na ga-emekwa ka n'aka na nlaghachie na-emetụbeghị ke ido chọrọ. The n'ozuzu fim nke usoro ihe omume bụ 5 nke 5 nke na-eme ya a ga-enwe maka bụla kọmputa ọrụ dị ka ọ pụrụ weghachite data ọ bụla mobile, PC na laptọọpụ enweghị ihe ọ bụla nke.
Usoro a ga-soro iji usoro ihe omume iji weghachite na faịlụ site na kaadị ebe nchekwa nke igwefoto bụ dị ka ndị a:
1. The kaadị agụ na kaadị bụ na-plugged n'ime USB n'ọdụ ụgbọ mmiri nke usoro:
2. The URL http://www.wondershare.com/data-recovery/guide.html bụ na-ịchọgharịrị ibudata exe faịlụ nke usoro ihe omume na otu ugboro mere ya bụ na-arụnyere ẹkedori usoro ihe omume:
3. The ụdị faịlụ na a ga-Ewepụtara bụ na-ahọrọ mgbe ahụ:
4. The ebe onye ọrụ chọrọ usoro ihe omume ịchọ bụ mgbe ahụ na-kpọmkwem:
5. The naghachi faịlụ ndị ahụ na-anya iji jide n'aka na ihe ndị ha chọrọ ndị na-ahọrọ na onye ọrụ ọkọkpọhi faịlụ natara site na ịpị natara bọtịnụ. Ọ na-na--ahụ kwuru na usoro ga-kwụsị Ozugbo faịlụ e natara:
Akwado SanDisk kaadị nke a usoro
a The Wondershare Data Recovery bụ ihe kasị mma omume na-akwado a dịgasị iche iche nke ebe nchekwa kaadị iji jide n'aka na arụpụta ihe kasị mma na-enwetara. The SanDisk ebe nchekwa kaadị na dakọtara ndị dị ka ndị:
1. SanDisk Jikọọ
2. SanDisk SDXC ebe nchekwa kaadị
Ndepụta na e kwuru n'elu bụ maa bụghị zuru ezu na-etinye ya na a n'ụzọ kwụ ọtọ n'ụzọ na Wondershare Data Recovery akwado ma na weere data ọ bụla na kaadị ebe nchekwa ka nke software bụ kpọmkwem kwupụta. Ọ bụ na mma nke usoro ihe omume nke na-eme ya otu nke kasị mma nhọrọ maka ọrụ.
SanDisk Kaadị ụdị
Esonụ bụ ụfọdụ n'ime ụdị nke na SanDisk kaadị na ojiji nwekwara e kwuru megide ha iji jide n'aka na onye ọrụ na-akawanye a mma nghọta banyere isiokwu na nke kacha mma o kwere omume n'ụzọ:
• SanDisk Oke PRO microSDXC UHS-m Kaadị 64 GB
Na kaadị nanị eji dị ka a multimedia nchekwa na ngwaọrụ.
• SanDisk Oke PRO microSDHC UHS-m Kaadị 32 GB
Nke a na-eji kaadị na-echekwa ma dekọọ na ná ụlọọrụ larịị.
• SanDisk Oke PRO microSDHC UHS-m Kaadị 16 GB
Ọ bụ a kaadị na-eji maka mobile ntị ka ụlọ ahịa data.
• SanDisk High Ntachi Obi Video Monitoring microSDHC na microSDXC kaadị ebe nchekwa 64 GB
Dị ka aha na-atụ aro, nnukwu videos na n'ihu nwere ike ịchekwa-eji nke a kaadị.
• SanDisk Oke gbakwunyere microSDHC UHS-m Kaadị maka Action ese foto 32GB
Kaadị e wuru nanị maka igwefoto ojiji na arụpụta ihe kasị mma na-Ya mere-ekwe nkwa.
• SanDisk microSDHC kaadị ebe nchekwa 16GB
Ọ bụ a kaadị na e mepụtara maka adị kwa ụbọchị ojiji. Ọ nwere ike na-eji na-akwado ese foto na mobile ngwaọrụ ma ọ bụ abụọ dị ka onye ọrụ ọchịchọ.
• SanDisk Ultra microSDXC UHS-m Kaadị maka ese foto 64GB
Dị ka aha na-atụ aro na kaadị e mepụtara maka ojiji na ese foto naanị. High definition foto na vidiyo nwekwara ike ịchekwa na ala na afọ ojuju.
Ọzọ ndepụta anaghị akwụsị ebe a na niile dị ka SanDisk nwere ihe ndị ọzọ kaadị mepụtara dị ka nke ọma na-arụ ọrụ mere. Ọ na-gwara iji jide n'aka na URL http://www.sandisk.com/products/memory-cards/microsd/ a gara maka nkọwa na ntụziaka na nke a.
> Resource> Kaadị ebe nchekwa> Kacha ụzọ naghachi data na gị SanDisk kaadị